Tababarahii Hore Santos Oo Kashifay Kooxda Isku Dayday Saxiixa Wiilka Muscjisada Ah Ee Rodrygo Ka Hor Imaatinkiisa Real Madrid - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Tababarahii Hore Santos Oo Kashifay Kooxda Isku Dayday Saxiixa Wiilka Muscjisada Ah...
Da’yarka reer Brazil Rodrygo Silva de Goes ayaa noqday hadal heynta kubadda cagta isbuucaan kadib markii uu magaciisa ku qoray buugga rikoorada koobka horyaalada yurub, xiddigaan da’da yar ayaa laga arkay hammi badan kadib markii uu saddexley ka dhaliyay Galatasaray kulan ka dhacay Santiago Bernabeu.
Real Madrid ayaa nasiib u heshay iney xiddigaan sanadkii hore kasoo bixiso lacag dhan 45 Malyan oo Pound, iyadoo ay taasi jirto hadana waxaa la kashifay in Liverpool ay isku dayday saxiixa xiddigaan ka hor inta aan loo deyrin.
Elano Blumer oo mar caawiye kasoo ahaa kooxda Santos, sidoo kalana fursad yar oo kumeel gaar ah kooxda maamulay ayaa xaqiijiyay in Reds ay isku dayday saxiixa xiddigaan.
“Waxaa jiray xiiso xoogan oo xiddigaan uu ka helayay Liverpool markii uu ku jiray kooxda yar yar, wey doonayeen, balse dalabkooda ayaa hooseeyay” ayuu yiri Elano.
“Kadib waxaa yimid dalabkii Real Madrid”
“Kooxda ayaan arintaan kala sheekeystay, waxaan u sheegay inuu xiddiga u qalmo in lagu qamaaro isla markaana aan jeclahay inaan la shaqeeyo”
Elano sidoo kale wuxuu qiray inuu tayada xiddigaan arkay xilli hore, sidoo kalana uu aaminsan yahay inuu qaar badan oo kubadda cagta ciyaara wakhtigaan ka fiican yahay.
Previous articleSAWIRO+DHAGEYSO: Maamulka Idaacadda Risaala oo soo xiray Barnaamijkii gurmadka Fatahaadaha